Miss Thailand သို့မဟုတ် ၂၀၁၀ မယ်စကြဝဠာ ပြိုင်ပွဲမှ အလှဆုံး အာရှသူ၏ ပုံရိပ်များ | My Diary
← နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့မြင်ကွင်းများ	The Mass Prayer in Bangladesh →	Miss Thailand သို့မဟုတ် ၂၀၁၀ မယ်စကြဝဠာ ပြိုင်ပွဲမှ အလှဆုံး အာရှသူ၏ ပုံရိပ်များ	Apr 24
ကမ္ဘာတစ်လွား အလှမယ်များကြားတွင် ချစ်စဖွယ် သွင်ပြင်နှင့် ပြေပြစ်ချောမောမှုတို့ ပေါင်းစပ်ထားသော ထိုင်း အလှမယ် Fonthip Watcharatrakul သည် ၂၀၁၀ မယ်စကြဝဠာ ပြင်ပွဲတွင် ဓါတ်ပုံ အစားဆုံးဆုနှင့် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ့ရိုးရာ ဝတ်စုံဆု နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ဦးတည်း သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့် အလှဆုံး အာရှသူဖြစ်သည်။
ထိုင်း အလှမယ် Fonthip Watcharatrakul သည် ထိုင်းဆင်ပေါ်တွင် ဝတ်ဆင်ပေးသည့် အဆင်တန်ဆာများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော “Siam Iyara” (Elephant of Thailand) ဟုအမည်ရသည့် ဆန်းဆန်းပြားပြား ရိုးရာဝတ်စုံဖြင့် မယ်စကြဝဠာ ပြင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အရပ်အမြင့် ၅ ပေ ၇လက်မ ရှိပြီး အသက် ၂၀ ရှိပြီ ဖြစ်သူ Fonthip Watcharatrakul သည် Assumption တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေ ကျောင်းသူတစ်ဦးလည်ဖြစ်သည်။
Source : http://patheincity.com/news/index.php/2010/09/miss-thailand-the-most-beautiful-of-asian-models-in-miss-universe/#ixzz1KNvSP2zS
Posted on April 24, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng, Photos and tagged ရည်းစား, Miss, younger. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့မြင်ကွင်းများ	The Mass Prayer in Bangladesh →	Leaveacomment